Prof. Dufle oo ka digay Khatarta caafimaad ee cabista Sigaarka iyo cudurada ka dhasha | Entertainment and News Site
Home » News » Prof. Dufle oo ka digay Khatarta caafimaad ee cabista Sigaarka iyo cudurada ka dhasha
Prof. Dufle oo ka digay Khatarta caafimaad ee cabista Sigaarka iyo cudurada ka dhasha
daajis.com:- Iyadoo maanta oo bishu tahay 31-ka May 2017 ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey joojinta cabista sigaarka ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxay bulshada uga digayaan qatarta uu leeyahay iyo cudurada halista ah ee ka dhasha.
Prof. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyed ayaa ka waramay dhibaatada uu sigaarka iyo noocyada kale ee tubaakadu ku hayaan caafimaadka iyo dhaqaalaha bulshada.
Waxaa uu sheegay Profesor Dufle in halku dhega sanadkan ee laanta caafimaadka Adduunka ee Who u yahay “How tobacco threatens the development of nations worldwide” (Tubaakadu waxay Halis ku tahay horumarka shucuubta caalamka & caafimaadka).
“Maanta oo ay ku beegan tahay 31-ka May 2017 waa maalinta loo asteeyay joojinta cabista sigaarka ee caalamka, taasoo looga gol leeyahay in bulshada lagu wacyi geliyo khatarta uu leeyahay, tubaakada waxay u kala baxdaa noocyo badan sida: Sigaarka, Siigarka, Bayb-ka, shiishada, Tubaakada la ruugo, mida la calaliyo iyo tan kale ee daanka la gashado, intaasoo dhanba waa khatar haba ku kala badnaadeene” ayuu intaa ku daray Prof. Dufle.
Waxaa uu sheegay in guud ahaan adduunyada cabista sigaarka ama dadka isticmaala Tubaakada lagu qiyaaso 1.45 bilyan oo qof. ku dhawaad Hal bilyan oo dhiganta (80%) ayuu sheegay iney ku nool yihiin waddamada soo koraya, isagoo xusay in cabista sigaarka ragga uu ku badan yahay qiyaastii shan jeer haweenka.
“Sigaarku wuxuu sababaa dhimasho degdeg ah ama cimri gaabad, waxaana la sheegaa in sanad walba ay u dhintaan sigaar cabista qiyaas dhan 7 milyan oo qof, in ka badan 6 milyan waa dadka caba sigaarka iyo kuwii horey u cabi jiray, halka malyanka kale ay yihiin dadka aan caabin sigaarka sida tooska ah (”Second hand Smoke)” ayuu yiri dhaqtarku.
Prof. Dufle ayaa tilmaamay in sigaarka laga helo in ka badan 40 maaddo oo sun kiimiko ah kuwaasoo dhalin kara cudurka kansarka. Waxaana ka mid ah ayuu yiri maaddada (Tar, Arsenic, benzene, formaldehyde, carbon monoxide & amooniyo) waxaa kaloo ku jira ayuu yiri dhaqtarku maadada Nicotin-ka oo sababa in la qabatimo sigaarka jir ahaan iyo maskax ahaan.
“Dadka sigaarka caba khatarta uu u keeno waxay ku xiran tahay waqtiga dheer ee uu isticmalayey iyo xaddiga uu ka isticmaalo, waxaa kaloo jirta in qofka haddii uu joojiyo isticmaalka tubaakada ama sigaarka waqti hore in khatarta cudur ee uu keenayo ay sii yaraan karto” ayuu intaa ku daray hadalkiisa Prof. Dufle.
Sidoo kale sigaarka wuxuu yareeyaa dhumaca xididdada dhiigga u qaada jirka intiisa kale taasoo keeni karta in si waafi ah uu u gaari waayo dhiiggii ay u baahnaayeen” ayuu yiri Prof. Dufle sii hadlayey.
Waxaa intaa ku daray dhaqtarku in 85% uu ragga ku keeno Caniinimo ama ragannimada oo uu waayo. Haweenka uurka leh wuxuu ku keenaa ayuu yiri inay ilmihii dhiciso ama ay dhasho ilmo miisaan hoose ama neefqabad qaba (asphyxia) ama u horseeda dhimasho kedis ah (sudden death), isagoo tilmaamay Dhalinyarada da’dooda ka yartay 20 sanno ay 3 jeer ka badan yihiin kuwa da’doodu ka weyn tahay 20 sano dhinaca dhimashada deg deg ah.
Prof. Dufle oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in cabista sigaarka ay waxyeelo u geysato aragga Indhaha, Maqalka, dhagaha iyo Maqaarka sidoo kale wuxuu wax yeelo u geystaa ayuu yiri dibnaha, ciridka iyo ilkaha.
1-Iney tubaakada ku kordhiyaan canshuuraha.
2-In cabista sigaarka laga mamnuuco goobaha la iskugu yimaado, sida Tiyaatarada, Suuqyada, Basaska, iskuulada, isbitaalada, shirarka iwm, loona sameeyo meelo gaar ah oo lagu cabo.
3-In bulshada laga wacyi geliyo dhibaatada caafimaad iyo mida dhaqaale ee sigaarku leeyahay.
4-In aan laga iibin caruurta aan qaangaarin.
5-In la mamnuco xayeysiinta qeybaha kala duwan ee warbaahintu u sameyso tubaakada iyo sigaarka.
Bulshada Soomaaliyeed ayuu sheegay 20-kii sano ee u dambeysay ee burburka, dagaalada iyo barakaca ay si xaddi leh u kordheen tirada sigaarka cabta gaar ahaan dhalinyarada da’da yar. Waxaa kaloo kordhay ayuu yiri dadka Shiishadda isticmaala dhalinyaro iyo dad waaweyn kuwaasoo uu xusay iney ku keeni karayso mustaqbalka dhibaato weyn oo dhanka caafimaadka.